တရုတ်နိုင်ငံ လျိုကျိုးမြို့၌ တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား ဝန်ဆောင်မှုအသစ် စတင် - Xinhua News Agency
နန်နင်း ၊ မေ ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လျိုကျိုး(Liuzhou)မြို့နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ မြို့တော် မော်စကိုမြို့တို့အား ချိတ်ဆက်ထားသည့် တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထားလမ်း တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲခြင်း စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရထားသည် မေ ၁၈ ရက်တွင် လျိုကျိုးမြို့မှ မော်စကိုမြို့အတွက် ဝန်ချီမြေတူးစက် ၅၇ စီး နှင့် မော်တာမြေညှိစက် ၄ စီးအား သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ရထားသည် ကီလိုမီတာ ၁၁,၀၀၀ ခန့် ခုတ်မောင်းသွားလာပြီးနောက် ရက် ၂၀ အကြာတွင် မော်စကိုမြို့သို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် လမ်းခရီးကြာချိန်ကို ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကျော်ကြာ လျှော့ချပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း လျိုကျိုးရုံးချုပ် စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်သူ Liugong Machinery ကုမ္ပဏီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Luo Guobing ထံမှ သိရသည်။
ယင်းလမ်းကြောင်းသည် ကွမ်ရှီးဒေသအား ဥရောပ နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသည့် ပထမဆုံး တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထားဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လမ်းကြောင်းအား လစဉ် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ပြေးဆွဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း China Railway Nanning Group ထံမှ သိရသည်။
အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (NDRC) မှ မေ ၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ယခုအထိ တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား ခရီးစဉ် စုစုပေါင်း အရေအတွက် ၃၈,၀၀၀ ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် twenty-foot equivalent unit ရှိသော ကွန်တိန်နာ ၃.၄ သန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China #Europe #Liuzhou #freight-train #တရုတ်နိုင်ငံ #ဥရောပ #လျိုကျိုး #ကုန်တင်ရထား #ဆင်ဟွာ #xinhua #Myanmar #xinhuamyanmar
NANNING, May 18 (Xinhua) — A direct China-Europe freight-train route has been launched linking the city of Liuzhou in south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region and the Russian capital Moscow.
The maiden train on this route departed on Tuesday from Liuzhou for Moscow, carrying 57 loaders and four motor graders.
It is scheduled to arrive in Moscow in 20 days after traveling about 11,000 km, slashing the transport time by more than two weeks, according to Luo Guobing, vice president of Liugong Machinery Co., Ltd.,aLiuzhou-headquartered machinery manufacturer.
The route is the first China-Europe freight-train service connecting Guangxi directly with Europe.
The route will operate once or twice every month, according to the China Railway Nanning Group.
Data released on Tuesday by the National Development and Reform Commission showed that the total number of China-Europe freight train trips has so far reached 38,000, and they have transported 3.4 million twenty-foot equivalent unit containers of goods. Enditem